Seeraan Ala Gadaa Aangoo Isaa Dheereffachuuf Murtii Mootummaan Irra Gahe Ilaalchisee – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSeeraan Ala Gadaa Aangoo Isaa Dheereffachuuf Murtii Mootummaan Irra Gahe Ilaalchisee
Seeraan Ala Gadaa Aangoo Isaa Dheereffachuuf Murtii Mootummaan Irra Gahe Ilaalchisee
Ejjennoo Waloo ABO fi KFO
Murtiin Manni Maree Federeeshii Gadaa Aangoo Mootummaa dheeressuuf dabarse kan akkaan nu yaaddesse tahuu ifa gochuu barbaadna. Kuni gochaa fudhatama seeraa hin qabnee fi Heeras kan faallessu tahuutti dabalee, nageenyaa fi tasgabbii biyyaa balaa guddaa irra kan buusu dha jennee amanna. Jalqabuma irraa eegallee, Heerri biyya kanaa Gadaa Aangoo Mootummaa dheeressuuf qaawwa gargaaru akka hin qabne ibsinee waan danqaa mudateef fala taha jennee itti amanne yaada furmaata siyaasaa nutti mul’ate dhiheessuun keenya ni yaadatama.
Paartiin biyya bulchu garuu yaada furmaataa dhiheessinee fi yaaddoo nuti ibsanneef gurra kennuu diduu fi moggaatti dhiisuudhaan kophaa isaa gulufuu itti fufee karaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa kan inni kophaa itti abboomuutiin dhimmicha gara Gumii Dhimmoota Hiikkaa Heraatti (Council of Constitutional Inquiry/CCI) qajeelche. Gumiin Dhimmoota Hiikkaa Heeraas maqaa Hayyoota mariisisuutiin warra yaadaa fi ilaalcha adda tahe qaban moggeessuudhaan namoota ejjennoo Paartii biyya bulchaa jiruu leellisan qofa maqumaaf afeeree tartiiba adeemsaa qulqullummaa fi amanamummaan itti hir’atuun dhimmicha keessummeesse. Kana malees, adeemsichi loogii walitti bu’iinsa dantaatiin (conflict of interest) uumamu irraa walaba hin taane. Haa tahu malee, murtiin Paartiin biyya bulchaa jiru maayyii irra gahe kun, ejjennooma Paartichi jalqabuma irraa kaasee itti dhiibbachaa ture kan mirkaneesse waan taheef guddoo nu hin ajaa’ibu.
Ulaagaalee bu’uuraa dimokiraasii bakka bu’ummaa keessaa tokko Filannoon yeroo Heeraan beekamaa tahe keessatti gaggeeffamuu, bakka bu’ootni Ummataan filamanis Gadaa Aangoo Heerri kenneef sana keessatti gaafatama isaanii bahatanii oggaa Gadaan Aangoo isaanii dhumate gaafatama of irraa dabarsuu dha. Filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa Hagayya 29, 2020tti akka gaggeeffamuuf Boordii Filannoo Biyyoolessaatiin baallamamuun/saganteeffamuun isaa ni yaadatama. Booda irra garuu, Boordiin Filannoo Biyyoolessaa Itoophiyaa sababa Mootummaan tatamsa’ina dhibee Vaayiresii Koroonaa ittisuudhaaf uggura sochiilee fi walgahiilee labseef jecha Filannoo saganteeffame kana gaggeessuu kan hin dandeenye tahuu isaa beeksise. Yeroma sanatti gama keenyaan, osoo Heera biyyaa keessa Aangoon Filannoo biyyoolessaa achi siiqsuuf/dheeressuuf dandeessisu hin jiraatin Filannoo kana achi butuun Danqaa Heeraa (Constitutional Crisis) kan uumu tahuu beeksisne. Akkanaanis, Fulbaana 2020 booda Bakka Bu’ootni Ummataan haaraatti filaman bakka hin jirretti murtiilee fi tarkaanfiileen Mootummaan fudhachuuf jiraatu Gadaan Aangoo Mootummaa Waggaa shan (5) jedhamee isa Heera keessa ifatti kaa’amee jiru sana kan faallessu tahuu ibsinee turre. Filannoon waggaa 5, 5tti akka gaggeeffamuu qabu kanneen abbooman Aangoowwan Heeraa 54(1) fi 58(3), akkasumas, Seerri Filannoo Boqonnaan 7 (article 7) yeroo filannoo kana achi siiqsuu ilaalchisee qaawwa ykn. carraa homaatuu hin hambisne ykn. hin akeekne.
Heerri amma jiru bara 1995 kan ragga’ee fi Itoophiyaatti bulchiinsi Abbaa Irrummaa fi kan Paartii tokkichaa hafee sirni dimokiraatawaan Paartiilee danuu hirmaachisu (multiparty democracy system) akka jiraatuu fi filannoonis yeroo Heeraan beekamaa tahe keessatti akka gaggeefamuuf carraa kan bane dha. Heerri kun, sirna bulchiinsa Itoophiyaa keessatti mirga hirmaannaa siyaasaa Ummatootaa mirkaneessuu fi hirmaachisummaa yaadota gara garaa (political pluralism) akka Kaayyoo Masakaatti (guiding principle) ifa godhee kaa’ee jira. Mirgootni fi dirqamootni ykn. itti gaafatamummaan Paartiilee siyaasaa kan Heera kana keessaa maddanis Labsii Seera Filannoo, Galmeessa Paartiilee Siyaasaa fi Naamusa Filannoo Itoophiyaa keessatti hammachiifamaniiti jiran.
Heera, Seeraa fi Sirna, akkasumas, tartiibota armaan olitti ibsaman kanaan masakamuu fi daangaa sana keessatti sossohuu fi wal tiksuun Paartiilee Siyaasaa biyya kanaa kanneen seeraan galmaawanii sochii qabatamaa irra jiran hunduma ilaallata. Waan taheef, Aangoo Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataa kan sadarkaa Federaalaa fi Naannoolees (The mandate of Regional and Federal Legislators) dheeressuudhaaf murtii Paartiin tokkichi kophaa isaa murteessu gadi jabeessinee mormina, dura dhaabbanna ! Murtiin Manni Maree Federeeshinii dabarse kun, Mootummaan amma biyya bulchaa jiru dirree dimokiraasii bal’isuudhaaf waadaa seenee ture ofumaan caccabsaa deemuu irraa kan madde komii fi mufii Ummataa duraanuu babal’achaa jiru daranuu hammeessa. Haalli kun mormii ummataa irra bal’aa kan gara jeequmsaatti illee cehuu malu dhalchuu danda’a kan jedhu yaaddoo guddaa qabna. Kun ammoo bakkuma kaleessa irraa kaanetti kan nu deebisu qofa osoo hin taane rakkina wal xaxaa dinagdee, hawaasummaa fi fayyaa Ummataa kan ammumaanuu mootummaadhaaf didhaa guddaa tahaa jiru irra aanuun haala itti ulfaatu keessa nu galchuu danda’a.
Yaadni furmaataa nuti fi Paartiileen, akkasumas, lammiileen biroo hedduun Fulbaana 2020 booda danqaa Heeraa biyya kana mudachuuf deemutti mala dhawuuf mariin hunda hirmaachisu (inclusive dialogue) haa gaggeeffamuuf dhiheessine Paartii biyya bulchaa jiru biratti fudhatama dhabuun isaa guddoo nu gaddisiisa. Gaabbiin inni dhalchuuf jiraatus nutti mul’ata. Murtiin Aangoo isaa dheereffachuuf Paartiin biyya bulchaa jiru kophaa isaa fudhate kun, faallaa Heeraa, kachachala aangoo fi Kaayyoo Masakaa Heera keessa ifatti kaa’ame kan adeemsaa fi sirna dimokiraatawaa Paartiilee danuu hirmaachisuu (a democratic and multiparty governance system) kan faallessu akka tahetti amanna. Kaayyoo dimokiraasii kan Gadaa Aangoo ykn. Yeroo Hojii Mootummaa daangessus ni faallessa ykn. gatii dhabsiisa. Dhugaa kana irratti hundaawuudhaan, murtiin Paartiin biyya bulchaa jiru aangoo isaa dheereffachuuf, kophaa isaa fi adeemsa Heeraan alaatiin fudhate fudhatama kan hin qabne tahuu addeessina.
Maayyii irratti, Paartiin biyya bulchaa jiru kophaa gulufuu dhiisee Paartiilee Siyaasaa kaanii wajjin gadi taa’ee dhimma kana irratti marii dhugaa fi gahaa tahe gaggeessuudhaan furmaata siyaasaa hunde-qabeessa argamsiisuuf akka waliin hojjennu ammas irra deebinee waamicha keenya dhiheessinaaf.
Waxabajjii 10, 2020
Booranii adulaa isaa jahaan bara 2019 keessa baallii fuutu gulantaa Abbaa Gadaa irratti eebbisee, Baqqalaa-Faajjii dhaabeefii lallabate
Booranii adulaa isaa jahaan bara 2019 keessa baallii fuutu gulantaa Abbaa Gadaa irratti eebbisee, Baqqalaa-Faajjii…
Gola Oromiyaa 'Sirna Gadaa' OBN
Voice of Oromiyaa: discussion regarding the elections mess in Ethiopia. ﻿ Mootummaan Dr. Abiy, mootummaan…
Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname
ONLF Position regarding the postponement of the elections